DAAWO SAWIRADA : Ciidamo kasoo goostay Maamulka Khaatumo oo kusoo biiray Puntland.
Home»Somali News»DAAWO SAWIRADA : Ciidamo kasoo goostay Maamulka Khaatumo oo kusoo biiray Puntland.
Facebook	Twitter	Wednesday, August 22 2012	DAAWO SAWIRADA : Ciidamo kasoo goostay Maamulka Khaatumo oo kusoo biiray Puntland.	Written by Admin
Comments (1)	Maamul Goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay usoo goosteen dhankooda Ciidamo ka tirsanaa Maamulka Khaatumo oo gaaraya ilaa 30 Askari,kuwaasi oo watay gaadiid dagaal,iyadoona Kaantaroolka Koonfureed ee Magaalada Garowe ay uga hortageen Masuuliyiin ka socota Maamulka Puntland.
Wasiir ku xigeenka Maaliyada Puntland Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan oo kamid ahaa Masuuliyiintii soo dhoweysay ciidamadaasi ayaa sheegey in ciidamadan ay ku soo biireen Puntland oo markii horeba ay ka tirsanaayeen. Cabdi Qowdhan waxa uu kaloo sheegay in ciidamadan been loo sheegey oo la marin habaayiyey balse markii danbe ay garowsadeen in ay dib usoo laabtan iyo ciidamadii ay horey uga tirsanaayeen ee Maamulka Puntland. Taliyaha ciidanka soo goostay ee ka tirsanaa Khaatumo Gaashaanle Dhexe Maxamed Cali Afgaab ayaa sheegay in ay ku hungoobeen maamulo looga dhawaaqey gobolka Sool islamarkaasina ogaadeen in aysan dan ugu jirin shacabka deegaanadaasi.
« DAAWO SAWIRADA : Sheekh Shariif iyo Mahiga oo isku raacay Dhamaystirka Xildhibaanada Cusub ee Baarlamanka.	DAAWO SAWIRADA : Wasaarada Caafimaadka Puntland oo wax qabad la aan ku dhaliishay UNICEF. »
kkkkkkkkkkkkkkk kk dhulbahante waa cada qqate alla niman ku han yaraa maxay yihiin wuxu majerten kamana marman kamana dayan canjarafaynta iyo mataga ay gidarada garoowe la fadhiyaan .kkkkkkkkkkkkkk niman ku ma siiilkii sado cali baa nin walba way la tumanayaan .towbatul qabxa yoowmayn ma maqasheen waa dhulbahante. waxay dheheen waxan nahay 1. khatumo .2.somali lan.3. jamhada ssc 4. puntland 5. tfg somaliya